Kooxaha la Xifaaltama Chelsea oo Maamulka Premier League ku Cadaadinaya in Baaritaano Culus lagu sameeyo Blues….(Maxaa lagu heystaa??) – Gool FM
Kooxaha la Xifaaltama Chelsea oo Maamulka Premier League ku Cadaadinaya in Baaritaano Culus lagu sameeyo Blues….(Maxaa lagu heystaa??)
Byare November 20, 2018
(London) 20 Nof 2018. Naadiga Chelsea ayaa wajihi karta baaritaano xoogan oo ku aadan sidii ay ula soo saxiixatay daafacooda Andreas Christensen.
Sida uu warinayo Football Leaks ee aalaaba kashifa sirta ciyaaraha in Blues ay 2012 kala soo wareegtay naadiga Brondby daafaca Christensen waana isla maalinkii ay Christensen aabihii ninka lagu magacaabo Sten u magacaabeen xilka ah inuu ciyaartoyda u soo wiideeyo.
Sten ee ah aabaha Daafaca Chelsea ayaa la sheegayaa inuu Chelsea u shaqo bilaabay 1-da bisha July 2012.
Waxaana muuqata inuu ka qaadan jiray kooxda reer London mushaar dhan bishiiba 11,400 oo bound muddo afar sano ah iyadoo ay jirto inuu weli u shaqeynayay kooxda Brondby sida tababaraha Goolhayayaasha.
Sharciyada Premier League ayaa dhigaya inaan la ogoleyn lacagaha la siiyo qof ka tirsan qoyska ciyaartoyda yar yar iyadoo Liverpool iyo Everton sanadihii dhawaa laga ganaaxay inay la soo saxiixdaan xiddigaha ay da’doodu ka yartahay 18-jirada.
Sida uu warinayo warsidaha Telegraph in kooxaha la xifaaltama Chelsea ay iminka maamulka sare ee Premier League ku cadaadinayaan in baaritaano lagu furo kooxda.
Real Madrid oo badalka Cristiano Ronaldo ka dooneysa kooxda Manchester United
SOOMAALIYA vs ITOOBIYA: Goobta, Goorta, sida uu ku soo bixi karo Xulkeena iyo wax kasta oo aad uga Baahan tahay kulanka Galabta ka dhacaya dalka Jabuuti